हैदराबाद विरुद्ध मुम्बई पहिले ब्याटिङमा – Talking Sports
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को आफ्नो पाँचौं खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले सनराईजर्स हैदराबाद विरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ । शारजाह क्रिकेट रंगशालामा मुम्बईका कप्तान रोहित शर्माले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
आजको खेलमा मुम्बईले आफ्नो टोलीमा कुनै पनि परिवर्तन गरेको छैन भने हैदराबादले दुई परिवर्तन गरेको छ । हैदराबादले भुवनेश्वर कुमारको स्थानमा सन्दिप शर्मालाई र खलील अहमदको स्थानमा सिद्धार्थ कौललाई सुरुवाती ११ मा स्थान दिएको छ ।
समान ४-४ खेल खेलेका मुम्बई र हैदराबादले दुईमा जित निकालेका छन् भने अंक तालिकामा क्रमश तेश्रो र चौथों स्थानमा रहेका छन् ।
अन्तिम १३ बलमा सनराईजर्स हैदराबादले छ विकेट गुमाउंदा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को ४३औं खेलमा किंग्स ११ पन्जाबले १२ रनको सनसनीपूर्ण जित दर्ता गराएको छ । ११औं खेलमा पन्जाबको यो पाँचौं जित हो भने ११ खेल नै खेलेको हैदराबादको यो सातौं हार हो ।
जितका लागि १२७ रनको झिनो लक्ष्य लिएर ब्याटिङ गर्न आएको हैदराबादले १९ दशमलब पाँच ओभरमा आफ्ना सबै विकेट गुमाएर मात्र ११४ रन बनाउन सक्यो ।
१०० रनको अवस्थामा चौथों विकेट गुमाएको हैदराबादले १४ रन जोड्दा बाँकी छ विकेट गुमाउन पुग्दा लज्जास्पद हारको सामना गर्न पुगेको हो ।
पन्जाबलाई जित दिलाउने क्रममा अर्शदिप सिंहले अन्तिम ओभरमा तीन विकेट लिए भने क्रिस जोर्डनले १९औं ओभरमा दुई विकेट हात पारे । सिंह र जोर्डनले समान ३-३ विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए ।
हैदराबादक ओपनर कप्तान डेभिड वार्नरले २० बलमा सर्वाधिक ३५ रन बनाए भने विजय शंकरले पनि २६ रनको पारी खेले । त्यस्तै जोनी बेरिस्टोले १९ रन, मनिष पाण्डे १५ रन तथा अब्दुल सामद सात रन बनाएर पेभेलियन फर्किए भने त्यस पछिका कुनै पनि ब्याट्सम्यानहरुले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् भने तीन जनाले रनको खाता पनि खोल्न भ्याएनन् ।
यस अघि खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पन्जाबले पुरै २० ओभर खेल्दै सात विकेटको नोक्सानीमा १२६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
बरुण चक्रवर्थीले घातक बलिङ गर्दै पाँच विकेट लिए पछि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आफ्नो ११ औ खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकाता नाइट राईडर्ससँग ५९ रनको लज्जास्पद. हार व्यहोरेको छ ।
जितका लागि १९५ रनको विजय लक्ष्य सहित ब्याटिङमा आएको दिल्लीले पुरै २० ओभर खेल्दै नौं विकेटको नोक्सानीमा १३५ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
दिल्लीलाई सस्तोमा समेट्ने क्रममा कोलकाताका लेग स्पिनर बरुण चक्रवर्थीले चार ओभर बलिङ गर्दै २० रन खर्चिएर सर्वाधिक पाँच विकेट लिए भने किफायती बलिङ गरेका प्याट कमिन्सले पनि चार ओभरमा १७ रन खर्चिएर तीन विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गराए । चक्रवर्थीको ट्वान्टी ट्वान्टीमा यो पहिलो पाँच विकेट हो ।
दिल्लीको तर्फबाट कप्तान श्रेयस ऐयरले ३८ बलमा सर्वाधिक ४७ रन तथा रिशब पन्त २७, रविचन्द्रन अश्विन अविजित १४ तथा शिम्रोन हेटमायर १० रनमा आउट भए भने अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
यस अघि खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटि गरेको कोलकाताले पुरै २० ओभर खेल्दै पाँच छ सात विकेटको नोक्सानीमा रन बनायो ।
कोलकाताको तर्फबाट नितिश रानाले सर्वाधिक रन बनाए भने पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका सुनिल नारायणले रबाडाको बलमा आउट हुनु अघि तुफानी पारी खेल्दै ३२ बलमा छ चौका र चार छक्काको मद्धतमा ६२ रन बनाए ।
ओपनर शुबमन गिल नौं, राहुल त्रिपाठी १३ तथा दिनेश कार्तिक तीन रन बनाएर आउट हुँदा खराब सुरुवात गरेको कोलकाताको लागि राना र नारायणले चौथों विकेटका लागि ५६ बलमा ११५ रनको साझेदारी गरे । कोलकाताका कप्तान ओइन मोर्गन १७ रनमा अविजित रहे ।
दिल्लीका एनरिच नोर्ट्जे चार ओभरमामा २७ रन, कागिसो रबाडाले चार ओभरमा ३३ रन तथा मार्कस स्टोइनिशले चार ओभरमा ४१ रन खर्चिएर समान २-२ विकेट हात पारे ।
राना र नारायणको अर्धशतकमा दिल्लीलाई कोलकाताको विशाल लक्ष्य
आहा ! क्लोपको कति राम्रो दाँत !
टस जितेर दिल्ली पहिले फिल्डिङ गर्दै